Manomboha ny fanentanana amin'ny marketing amin'ny horonantsary amin'ny fomba 3 | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 9, 2019 Alarobia, Oktobra 9, 2019 Andre Oentoro
Mety efa naheno tamin'ny alàlan'ny voaloboka ianao fa misy vidiny ilaina amin'ny fampiasam-bola ho an'ny orinasa mitady hanatsarana ny fisian'izy ireo an-tserasera. Ireo clip ireo dia tsara amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po satria mahay mandray anjara amin'ny mpihaino izy ireo ary mampita hafatra saro-pantarina amin'ny fomba mahomby - inona no tsy tiana?
Ka manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao manomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny varotra horonantsary? Ny fampielezana horonan-tsary amin'ny horonantsary dia mety ho toa tetikasa goavambe ary tsy fantatrao izay dingana voalohany tokony hatao. Aza sosotra fa hanome toro-hevitra vitsivitsy hanampy anao izahay.
1. Fantaro ny mpihaino anao
Alohan'ny hanombohanao hitady fitaovana hamoronana horonan-tsarinao dia mila fantarinao aloha hoe iza ny mpihaino anao. Raha tsy fantatrao hoe iza no tianao ahatongavan'ilay horonan-tsary dia sarotra ny mamorona atiny ary mbola ratsy kokoa aza, mety hiafara amin'ny fanangonana vovoka izany satria tsy misy olona te-hijery azy.
Zava-dehibe ny fahalalana hoe iza ny mpihaino anao satria izy ireo no hijerena ny horonantsarinao. Fantaro ary izy ireo - ny zavatra tiany, ny zavatra tsy tiany, ny zavatra iadiany, ary ny fomba ahafahanao manome vahaolana amin'ireo olan'izy ireo.
Angamba niady tamin'ny fomba fampiasana ny vokatrao na serivisinao izy ireo, koa ny famoronana horonan-tsary manazava amin'izy ireo momba ny vokatrao na ny marikao no fomba tsara hanombohana.
2. Manaova fikarohana teny lakile
Ny teny lakile dia tsy natao ho an'ny laharana ao amin'ny Google fotsiny. Mety hahasoa azy ireo ihany koa izy ireo mba hahazoana antoka fa hanangona ny fomba fijerinao ny horonan-tsary toa azy ireo amin'ny milina fikarohana. Rehefa manoratra eo amin'ny bara fitadiavana amin'ny Youtube ianao dia hahita boaty mandatsaka feno feno sosokevitra.
Ireto sosokevitra ireto dia ilaina amin'ny vidéo-nao satria asehony anao ny zavatra tadiavin'ny olona malaza. Raha vantany vao manana hevitra momba ny teny lakile tadiavin'ny olona ianao, dia azonao atao ny manangana ny atiny manodidina an'ireo teny ireo ary mamorona zavatra tian'ny olona ho hita.
Azonao atao ny manatsara ny SEO amin'ny horonan-tsarinao amin'ny alàlan'ny fampiasana sary kely, lohateny ary famaritana mahaliana izay manintona ny zavatra tadiavin'ny mpihaino anao. Ampiasao fotsiny ny teny lakile araka izay azonao atao amin'ny boaty famaritana na lohateny.
3. Makà fanampiana avy amin'ny fitaovana sasany
Ny Internet dia feno loharanon-karena be dia be. Isaky ny olana rehetra dia betsaka ny mety hahitanao ny vahaolana ao amin'ny Google.
Raha mitady mamorona horonantsary ianao nefa tsy mahalala ny fomba anaovany izany dia aza avela hanakana anao tsy hanomboka izany. Ny horonan-tsary dia mety ho toa fampiasam-bola be ary mety ho toa zavatra misavoana, fa mino na tsia, afaka mahita ianao fitaovana amin'ny famoronana horonan-tsary mora izany na maimaim-poana aza.
Tsy mila manam-pahaizana momba ny varotra horonantsary ianao raha vao mamorona horonantsary samirery. Na dia vao manomboka aza ianao dia afaka miditra amin'ny fitaovana isan-karazany amin'ny Internet.
Ankehitriny dia manana hevitra sarotra ianao momba ny zavatra tokony hiomanana amin'ny fanombohana amin'ny farany ny fampielezana varotra horonantsary anio. Noho izany, manomboka lisitra ireo teny lakile ireo ary fantaro hoe iza ny mpihaino anao. Raha vantany vao voalamina ireo roa ireo dia tonga ny fotoana hanombohana mamorona ny horonan-tsarinao.
Tags: Lahatsary Marketingpaikadin'ny horonantsary
Andre Oentoro no mpanorina ny Breadnbeyond, orinasan-dahatsary mpanazava nahazo loka. Manampy ny orinasa hampisondrotra ny tahan'ny fiovam-po izy, hanidy ny varotra bebe kokoa ary hahazo ROI tsara amin'ny horonantsary manazava (ao anatin'io lamina io).
Ahoana ny fomba handresena ireo mpanjifa